Super Diamond Deluxe aad xusuusisaa raaxo buuxda! Waxay ka dhigaysa mid aad dareento sida ay tahay in ay iyada oo dhagaxyo dhalaalaya aad bixiya lamoodaa badan. Beauty of Afyare been in xaqiiqda ah in ay jiraan lahayn wilds ama calaamado kala firdhiso. Sidaas, aad u baahan tahay in ay ujeedadoodu tahay kuwa isku mid ah 3 ama 4, inay Idinkaga dhinaca badiyeen. All aad u baahan tahay waa nasiib yar boqorkii dalka u noqon Super Diamond Deluxe duntu Afyare.
IGT ama International ay ciyaareyso ay Technology waa software ciyaaraha khamaarka bixinta shirkadda tan 2006 magaca shirkad Gtech markii Gtech helay Lottomatica in 2006. Tan iyo markaas, shirkadda samaynayo kulan booska cajiib mesmerizing ku caashaqay casino kasta oo hadda ka dibna. Recently, in 2015, shirkadda magaceeda helay markii ay heleen shirkadda American IGT iyo wareegay magaceeda.
Super Diamond Deluxe waa ciyaar fudud Afyare. theme waxaa la xiriira dhagaxyo qaali ah sida calaamadaha waa luulka, jades iyo dheeman cutwork qurux badan. Sidaas duntu fiiriyaa xarrago leh asalka u qoto dheer oo cas dhagaxyo dhalaalaya sitaa dhalaalaysa dul. Afyare waxaa la ciyaaray 5 duntu iyo 10 paylines iyo ma loo baahan yahay in line guul ka bilaabi kartaa oo keliya ka ambadeen ugu horeysay. Marka laga reebo ka GEMS midabo, 10, J, S, K, iyo A waa calaamado yar yahay bixinta. Ma jiraan wax wilds ama kala firdhiyaa in booska this manidu lamoodaa aad u. gunno ugu muhiimsan waa muujinta ah Ghanna horusocod ee ciyaarta. Sidoo kale, sida calaamadaha aad Mire Waqaf oo ku saabsan duntu ku, waxaa suurtagal ah in la sameeyo guul weyn in booska this. In feature ee Ghanna Progressive, ma jiraan isku go'an guusha loo baahan yahay. Waxaad u baahan tahay oo keliya inuu ka soo leexdo duntu in ay dahabka ahaa oo aan kala sooc lahayn ku dhacaya inta aad dhigeeysa. soo laabtay ayaa boqolkiiba ciyaaryahanka waa mid aad u wanaagsan sida Afyare bixisaa DBI ku saabsan 96.43% waqtiga . kala duwan sharadka wuxuu ku bilaabmaa ka £ 0.20 iyo kor u kaco in ay £ 500. Raadinta at Degenaansho ah, the game offers somewhere between low to medium volatility, Si kastaba ha ahaatee, ay sabab u tahay horumar jaakbotyada, dadka qaba rabitaanka cuntada khatarta sare leh sidoo kale way harraad beelaan karaa.
The asalka iyo soundtrack way fiican iyo si fiican isbahaysi la theme oo ka mid ah Super Diamond Deluxe. IGT leeyahay naadi kale oo kala duwan sidoo kale la xiriira mawduuca, laakiin booska u taagan kala duwan eegaya halleeyo lillaahinimada iyo enjoyability ee saakay ka. Sidaas, dadka kaliya doonayaan in ay haystaan ​​waqti xiiso leh, waa in dhab ahaan u tagaan booska this a.